Ukuqikelela incwadi endiyifunda kwezi ndima | Uncwadi lwangoku
Kudala kudala ndinizisela elinye lamanqaku anomxholo wayo yenye yeentandokazi zakho: imidlalo yokubhala. Ngesi sihlandlo, inqaku endikubonisa lona namhlanje malunga Thelekisa le ncwadi ndiyifundayo ngeli xesha ngothotho lweendinyana endizokubeka apha. Ayikho enye into engaphaya koko. Ayizukubekwa umbhali okanye uhlobo loncwadi ekufanele ukuba lubekwe kuyo, kwaye ngokuqinisekileyo ayizukufanelekela impendulo kuGoogle. Masinyaniseke kwiziqu zethu!
Ukuba uyafuna kwaye uyenze isebenzisane ngakumbi, ungenza okufanayo kwincwadi ehamba nawe ngoku. Khumbula ukuba unecandelo lamagqabaza alo. Masidlale? Okulandelayo, ndikushiyela imiqolo ethile yale ncwadi intle endinayo ngoku ezandleni zam.
1 Imiqolo evela encwadini
1.1 Isiqendu 1
1.2 Isiqendu 2
1.3 Isiqendu 3
Imiqolo evela encwadini
Indalo yasendle ithwala iinyanda zokuphilisa; ithwala yonke into ayifunayo umntu obhinqileyo ekufuneka eyazi kwaye ayazi. Iphethe iyeza lezinto zonke. Iphethe amabali namaphupha, amagama, iingoma, imiqondiso kunye neempawu. Zizo zombini isithuthi kunye nendawo ekuyiwa kuyo.
Iindaba ngamayeza. Ndandinomdla kubo okoko ndeva eyokuqala. Banamandla angaqhelekanga; Abanyanzeli ukuba senze, senze okanye sisebenzise into ethile: kufuneka simamele. Amabali aqukethe iindlela zokulungisa okanye ukubuyisa nayiphi na ilahleko. Amabali abangela iimvakalelo, usizi, imibuzo, ukulangazelela kunye nokuqonda okuzisa ngokuzenzekelayo i-archetype, kule meko, uMfazi wasendle.
Yintoni le ifayo? Inkohliso, ulindelo, umnqweno wokuba nayo yonke into, ukufuna izinto ezintle kuphela, yonke into iyafa. Kuba uthando luhlala lukhokelela ekwehleni kuhlobo lokufa, kuyaqondakala ukuba kutheni ukuzeyisa kangaka kwaye namandla angako okomoya ayimfuneko ukuzibandakanya koku kuzinikela.
Ngaba uyazi ukuba yeyiphi incwadi? Ufumene kweliphi inqaku ukuba ndithetha ngantoni? Ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba, beka izicatshulwa kwincwadi oyifundayo ngoku kwicandelo lamagqabaza kwaye masidlale sonke. Kuya kuba mnandi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Qikelela incwadi endiyifunda kwezi ndinyana
Inokuba "Abafazi abaleka neengcuka." Ozithobileyo
URachel Gonzalez sitsho
Abafazi abaleka neengcuka.
Ndiyifumene kwisithombe nakwisigaba sokuqala.
Phendula uRaquel González
UAdy Espinoza sitsho
Abasetyhini abaleka neengcuka ... ndiyayithanda.
Phendula Aby Espinoza
ULaura Meyi sitsho
Ndicinga ukuba umdlalo wokuqikelela uyimbono entle hahaha
Phendula uLaura Mayo
URay Ramon sitsho
Andikwazi ukuqikelela ukuba zeziphi na iincwadi, kodwa ngokuqinisekileyo zimbi kwaye azinyamezeleki.
Phendula uRay Ramón
UGabriela vega sitsho
Abafazi abaleka neengcuka nguClarissa Pinkola !!
Phendula uGabriela Vega
ULynn W. sitsho
Abasetyhini abaleka neengcuka, ndiyifunda ngoku ngokwenene
Phendula uLynn W.
Ngaba yiminyaka engama-25 ukusukela kula manoveli asi-7? Unyanisile. Kwaye ngaba siyazifunda okanye akunjalo?